keydinta tamarta, catalysis, kiimikada falanqaynta, makaanikada, xayeysiinta, bayoolaji, microelectronics, dareeraha, iwm Nb2AlC budada dhoobada waxaa loo isticmaali karaa duulista, aerospace, warshadaha elektarooniga ah iyo warshadaha nukliyeerka.
Mo3AlC2 waa xubin ka mid ah vdW MAX nidaamka qalabka lakabyada. Si la mid ah garaafka iyo MoS2, wajiga MAX waa mid qaabaysan, qaaciddada guudna waa Mn + 1AXn, (MAX), halka n = 1 ~ 3, M ay tahay biraha kala-guurka hore, A waa curiyaha aan la taaban karin, Xna waa kaarboon iyo / ama nitrogen. Xaaladdan gaarka ah, M = Mo, A = Al, X = C, n = 2.
MAX dhoobada (oo ay ku jiraan titanium silicon carbide, qalabka Ti3AlC2, iwm.) Waa nooc cusub oo ka mid ah farsamaynta qalabka dhoobada ee soo jiitay dareenka badan. Dhirta dhoobada ahi waxay ka kooban yihiin in ka badan lixdan nooc oo carbides ternary ama nitrides ah.
Dhoobada Ti2SnC waa nooc cusub oo qaab dhismeedka dhoobada leh qaab dhismeedka lakabka gaarka ah kaas oo lagu shaqeyn karo. Waxay leedahay labadaba sifooyinka ugu fiican ee birta iyo dhoobada. Si la mid ah birta, waxay leedahay faa iidooyinka korantada iyo kuleylka kuleylka, farsamaynta, dulqaadka waxyeelada sare iyo caabbinta shoogga kuleylka.